“Hlalani Nilindile”(Mateyu 25)
UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO “Nabani Na Ofuna Ukuba Mkhulu Phakathi Kwenu Makabe Ngumlungiseleli Wenu”
UBUNCWANE OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO Thobela Imiyalelo Emibini Emikhulu
INDLELA YOKUPHILA YAMAKRISTU Izinto Ezinokukunceda Ubonise Ukuba Uthanda UThixo Nommelwane
UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO Hlala Unokholo Olomeleleyo Kule Mihla Yokugqibela
INDLELA YOKUPHILA YAMAKRISTU Sisondele Kwisiphelo Sale Nkqubo Yezinto
Matshi 26–Aprili 1
UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO “Hlalani Nilindile”
INDLELA YOKUPHILA YAMAKRISTU Ukuphucula Ubuchule Bethu Bokushumayela—Masizifundise Ukulungiselela Izifundo Zethu
Ubomi BamaKristu Nomsebenzi Wokushumayela–Incwadi Yentlanganiso | Matshi 2018
UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO | MATEYU 25
Kumzekeliso weentombi ezinyulu, uYesu wayethetha nabathanjiswa kodwa lo mzekelo uyasebenza nakuwo onke amaKristu. (w15 3/15 9-14) “Ngoko ke, hlalani nilindile, ngenxa yokuba ningayazi imini okanye ilixa.” (Mat 25:13) Ungakwazi ukuwucacisa umzekeliso kaYesu?
Umyeni (ivesi 1)—NguYesu
Iintombi eziziingqondi ezazilindele ukufika komyeni (ivesi 2)—Abathanjisiwa abakulungeleyo ukwenza umsebenzi wabo ngokuthembeka nabakhanya njengezikhanyiso de kube sekupheleni (Fil 2:15)
Kuyakhwazwa: “Nanku umyeni!” (ivesi 6)—Ubungqina bobukho bukaYesu
Iintombi ezizizidenge (ivesi 8)—Abathanjiswa abayokukhawulela umyeni kodwa abangakhange bahlale belindile nabangakhange bathembeke
Iintombi eziziingqondi azivumi ngeoli yazo (ivesi 9)—Emva kokutywina okokugqibela, abathanjiswa abazukwazi ukunceda nabani na oye akathembeka
“Wafika umyeni” (ivesi 10)—Ngasekupheleni kwembandezelo enkulu uYesu uza kugweba
Iintombi ezinyulu ezilungileyo zingena naye kwitheko lomtshato; ucango luyavalwa (ivesi 10)—UYesu uqokelela abathanjiswa abathembekileyo abase ezulwini, abo bangathembekanga balahlekelwa lithemba lokuphila ezulwini
Lo mzekelo awufundisi ukuba abathanjiswa abaninzi babengayi kuthembeka kuze kufuneke ukuba kungene abanye endaweni yabo. Kodwa sisilumkiso sokuba umthanjiswa ngamnye unokuzikhethela ukuba uza kulungela ukufika kukaYesu aze ahlale elindile okanye uza kuba sisiyatha aze angathembeki. UYesu wathi: “Hlalani nilungile.” (Mat 24:44) Nokuba sineliphi ithemba, uYesu ufuna ukuba sonke sihlale sithembekile, sihlale silindile.
Ndibonisa njani ukuba ndihlala ndilindile?
UBOMI BAMAKRISTU NOMSEBENZI WOKUSHUMAYELA–INCWADI YENTLANGANISO Matshi 2018